Waa maxay sababta MMM Nigeria mar kale u soo noqon doonto! Ka digtoonow tan - Wareegga Maalka
Bogga ugu weyn Waa maxay sababta MMM Nigeria mar kale u soo noqon doonto! Iska jir Tan
Yaa awooda xusuuso ma ilowday wixii ka dhacay Disember ee 2016 MMM Nigeria? Waa hagaag, waxay la soo noqdeen dalab xitaa ka sii qosol badan. Midab ii la yaab in dadka reer Nigeria ay wali wax ku iibsanayaan qorshaha Ponzi.
Waxaan ku jiray jaamacadda markii damaca MMM Nigeria uu ahaa kii ugu sarreeyey. Ku dhawaad ​​qof walba oo aan aqaanay ayaa qayb ka ahaa, si kastaba ha ahaatee, waxaan had iyo jeer dareemayay in faahfaahinta geedi socodku ay aad u badan tahay, in kasta oo inta badan jaallahayga ay qatarta galeen oo "lacag caddaan ah".
Waxaan dhex geli lahaa koox oo waan sii maqli doonaa “Ma leedahay GH-ed?"Ama"Waxaan rabaa PH.”Aakhirkii, waxaan fahmay macnaha eray -bixinnadan marka ay sii samaynayaan xoogaa lacag ah.
Dhibaatadu waxay timid bishii Diseembar markii xisaabaadkaas “la xanibay”. Waxay ahayd bil ka dib markii dib loo bilaabay waxayna u maleeyeen inay “maalgelin karaan” khidmaddooda iyo kirooyinkooda, lacagta labanlaabaan, bixiyaan baahiyahooda oo ay weli haystaan ​​xoogaa lacag ah oo wanaagsan.
Inta badan riyooyinkan ayaa si lama filaan ah loo joojiyay oo qaar badan oo iyaga ka mid ah ay lacag badan ku bixiyeen.
Waxa xiisaha lihi, iyada oo la adeegsanayo fikradaha kala duwan ee ah in qorshahan Ponzi uu mar kale soo noqday, ma caawin karo laakiin waxaan la yaabanahay sababta ay mmm dib ugu soo noqon doonto Nigeria?
Waa maxay MMM Nigeria?
MMM (Mavrodi Mondial Moneybox) waa shirkad saamiley ah oo ka bilaabantay 1989 Ruushka saddex walaalo ah-Sergei Mavrodi, Olga Melnikova, iyo Vyacheslav Mavrodi.
Waxay aad caan ugu yihiin fulinta mid ka mid ah qorshayaashii ugu weynaa ee Ponzi ee adduunka, taasoo ka tagtay qiyaastii 40 milyan oo qof oo ka yar $ 10 bilyan.
Bishii Nofembar 2015, MMM waxay soo bandhigtay degel Nigerian ah, kaas oo ballan qaaday 30% macaash bishiiba. MMM Nigeria waxay ka faa'iideysatay saboolnimada iyo qawaaniinta dowladda ee liidata si ay ugu qaniinto inta badan saboolka iyo shaqo la'aanta bilowga ah.
Taajiriinta, si kastaba ha ahaatee, waxay lahaayeen fikradda ah inay sidoo kale wax badan samayn karaan haddii ay wax badan gashadaan. Xaq la fahmi karo ?! Yaa aan rabin inuu sameeyo lacag yar oo dheeri ah ?!
Iyada oo buunbuuninta ku xeeran, waxay u badan tahay inay dareemeen inay tahay fursad maalgashi oo wanaagsan oo lagu dhex milmay. Dhamaadkii 2016, xubnaha isdiiwaangaliyay waxay ahaayeen 2.4million!
Sidoo kale akhri: 16 Shirkadaha Maraakiibta ugu Fiican Nigeria | Eeg Soo -jeedimaha
Waa maxay Qorshaha Ponzi?
Magaca “Qorshaha Ponzi” waxaa laga helay khiyaano Charles Ponzi sanadkii 1919. Guud ahaan, qorshaha Ponzi waa maalgashi khiyaano ah halkaas oo maalgashadayaasha loogu yabooho heerar aad u sarreeya oo soo noqosho leh oo aan lahayn wax khatar ah.
Waxay la mid tahay tan qorshayaasha mucjisooyinka maadaama ay labadooduba si weyn ugu tiirsan yihiin maalgelinta maalgashadayaasha cusub. Hadda waa tan khiyaanada:
Hal ama laba qof ayaa la yimaada fikradda oo qanciya laba qof oo kale. Xubnahan cusubi waxay samaystaan ​​maalgashigooda (markaa dadkii hore lacag baa la siiyay, sax ?!). Hadda, labada qof ayaa soo baxay oo isku dayay inay midkiiba helaan laba qof oo kale.
Markay afartan qof ee cusubi maalgashadaan, waxay maalgashadayaasha ugu horreeya siiyaan “maalgashigooda” ka dibna suuqa ayay galaan si ay u helaan siddeed qof ee soo socda, iwm.
Maalgashadayaasha koowaad iyo kan labaad, iyagoo "lacag caddaan ah" ayaa lagu dhiirri -gelinayaa lacag -bixintii ugu horreysay inay xoogaa maal -gashadaan oo ay bilaabaan wacdinta ereyga ku saabsan qorshaha.
(Tani waa markaad bilaabi lahayd inaad maqasho “Runtii waa sharci o. Waxaan maal galiyay ₦ 1,000 waxaanan kasbaday ,8,000 XNUMX").
Markhaatiyaal yar iyo buunbuunin badan, shirkaduhu waxay bilaabaan inay la kulmaan kororka qulqulka maalgashadayaasha, xitaa dad badan ayaa diyaar u ah inay qayb ka noqdaan. Maalgashadayaashan cusubi waxay sii wadaan inay bixiyaan kuwii hore u taageeri jiray oo haramka ayaa sii koraya.
Si kastaba ha ahaatee, sida ugu dhakhsaha badan marka aysan jirin dad diyaar u ah inay ku biiraan oo samaystaan ​​maalgashi, qorshuhu ugu dambayntii wuu furmaa.
Tani waa sababta oo ah, maadaama nidaamku gebi ahaanba ku socdo maalgelinta dad cusub si loo bixiyo kuwii hore, isla marka aysan jirin dad cusub oo la qanciyo, si otomaatig ah ma jiri doonto lacag ku filan oo lagu bixiyo xubnihii hore.
Sidee MMM Nigeria u Shaqaysaa?
Hadda, waxaa laga yaabaa in qofku bilaabo inuu is weydiiyo waxa ballanku ahaa? Maxay ugu fududaadeen qancinta ?!
Waxaan ula jeedaa, waxaan ognahay inay jiraan dad aad u caqli badan oo had iyo jeer raadinaya inay labanlaabaan wax yar oo ay haystaan ​​iyo sidoo kale kuwa hodanka ah ee haysta xoogaa lacag caddaan ah uma malaynayaan in laga badiyo. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jiray dad aad u dhaleeceyn badan oo ku dhacay qorshahan.
Haddaba, sidee loo qanciyey, sideese u sameeyeen lacag caddaan ah oo dheeri ah?
MMM waxay naftooda u dallacsiisay madal ay ka -qaybgalayaashu ku heli karaan koror 30% ah xaddiga ay maal -galiyaan 30 maalmood ka dib. Ma jirin dulsaar go'an oo joogto ah maadaama uu bangi ku jiro, halkii aad ka heli lahayd abaalmarino ka dib markaad "caawimaad bixiso".
Qiyaasta 30% 30 maalmood gudahood waxay ka dhalatay fikirka 1% kordhinta maalin kasta. Marka, wadarta lacagta ee ka -qaybgalehu samayn karo dhammaadka bisha ayaa ah wax -soo -saarka ku -dhufashada lacagta aad bixisay 1.30.
Taasi waa, haddii aad "caawimo siiyey”Laga yaabee ₦ 15,000, 30 maalmood kadib, waxaad filan lahayd ₦ 15,000 x 1.30. Tani waa qiyaastii ,19,500 XNUMX.
Hal -abuurayaasha iyo dhiirrigeliyeyaasha ayaa kuu sheegi doona (haddii aad ku dhibtoonayso inaad weydiiso) in extra 9,500 ee dheeraadka ah laga helay tabarucaad ay sameeyeen xubno kale.
Sidoo kale akhri: GO NIDAALKA GANACSIGA NIGERIA - HORUMARINTA WAXYAABAHA NIGERIAN
Maxaa noqday MMM Nigeria?
Waa hagaag, way burburtay!
Muddo sannad ah ka dib, MMM Nigeria ayaa ku dhawaaqday in la xayiray akoonnadii xubnaha. Sida laga soo xigtay shirkadda, waxay ka dhalatay “culeysyo badan oo nidaamyada ah iyo dareenka xun ee ay keeneen Dowladda iyo warbaahinta baaxadda leh.”
Laakiin mar labaad, taasi waxay ahayd qorshaha, waxayna soo shaac baxday bishii Diseembar ee 2016.
Iyadoo aan loo eegin sababaha farxadda leh ee ay bixiyeen, waxay ahayd bishii Diseembar dad badan ma ilaawi doonaan. Dadku waxay u yimaadeen inay aaminaan shirkadda waxayna u maleeyeen inay u yimaadeen inay sii joogaan.
Khidmadaha dugsiga, khidmadaha mashruuca iyo qoraalka, miisaaniyadda arooska, kirada, iyo qaar kaloo badan, ayaa gabi ahaanba la maalgeliyey oo si ba'an u lumay.
Shaki la'aan waxay u ahayd khibrad aad u xun dad badan oo reer Nigeria ah, si aad u badan Wakaaladda Maareynta Degdegga ah ee Gobolka Lagos wuxuu ka codsaday muwaadiniinta inay ka feejignaadaan dadka isku dayaya inay isdilaan.
Haa! Dadku waxay isku dayeen inay noloshooda dhammeeyaan.
Bal qiyaas maalgelinta lacag aad u tiro badan oo lagu aaminay daryeelkaaga, ama khidmadaha ilmahaaga oo rajaynaya in la labanlaabo ka dibna maqlo inay dhammaatay.
Dadka reer Nigeria waxay lumiyeen in ka badan 18 bilyan oo Naira mashruuca MMM Nigeria.
Kuwii Hore Soo Noqda
Waxa la yaab leh, tani ma ahayn dhammaadkii qorshaha MMM Nigeria. Waxay markii ugu horreysay soo laabteen Janaayo 2017. 11 -kiith ee Febraayo, waxay ku dhawaaqeen in xadka ka -bixitaannada la qabsan doono. Si kastaba ha ahaatee, ma jirin xad ka bixitaan waqtiyadii hore ee qorshahan.
Dib -u -dhaca ku yimid lacag -bixinta ayaa xubnaha qaar ka noqday wixii ay kari kareen waxayna ka tageen nidaamkii. Si kastaba ha noqotee, MMM Nigeria waxay ballanqaaday xoogaa “maalgashadayaal daacad ah”In ay heli doonaan lacagtoodii dib loo xayiray. Tani waxay suurtogal u ahayd oo kaliya maalgashiyada kahor 2017 haddii ay kuwo cusub geliyaan.
Si loogu sii dhiirri -geliyo, waxay sheegeen in qabowga bisha December uu ahaa kaliya in nidaamka la sugo maadaama uu jiray cadaadis badan oo ku saabsan bixitaannada oo ku jiray dhigaalka. Waxay isbarbar dhigeen sida ay ugu dhacdo bangiyada bishii ugu dambaysay ee sannadka.
Markaa, waxay sii wadday inay ku dhiirrigeliso inay bixiyaan lacago badan si ay ugu istaagaan xitaa fursad weyn oo ah inay lacagtooda dib u helaan.
Nasiib darro, dadku mar kale ayay u dhaceen. Halka qaar ay lacagtoodii si buuxda u soo cesheen, qaarna qayb ka heleen, halka qaarna aanay waxba helin.
Sidoo kale akhri: Hindise Sharciyeedka Hanti -dhowrka ee Nigeria ma khiyaamo baa? Helitaanka Xaqiiqda
Waa maxay sababta MMM Nigeria mar kale u soo noqon doonto?
Waxaad u maleyn doontaa in dhacdooyinkaas oo dhan ka dib, dadka reer Nigeria ay ka digtoonaadaan shirkadan. Nasiib darro, taasi maahan gabi ahaanba maaddaama ay jiraan dad reer Nigeria ah oo horay u iibsanayey fikradda. Iyada oo leh WhatsApp firfircoon iyo kooxaha telegram -ka, dadku wali waxay ku biirayaan “dib loo habeeyay”MMM Nigeria.
Markan, waxay ballan qaadayaan faa'iido 50% marka aad “PH - Bixi Caawimo”. Tani waxay ka soo horjeedaa abaalmarinta 30% ee nuqulkii hore ee hadda aan jirin.
Qorshahan ayaa si rasmi ah loo xiray bishii Abriil 2018 kadib markii uu dhintay aasaasihii Sergei Mavrodi. Qaabkan dib -u -habaynta lagu sameeyay ayaa la filayaa inuu “ka dhigo dhaxalka Mavrodi mid qiimo leh”. Sida lagu sheegay bayaan lagu qoray mareegaha shirkadda:
“Sida qorrax -soo -baxa subaxdii, Iskaashiga MMM u deji xawaaraha 22 -ka Janaayo 2019 adduunka oo dhan. Laga soo bilaabo dayacaad ay dad badani ka baqaan waxa aan la garanayn ee ka -qaybgalayaasha mustaqbalka bilawga ah; waxaan joognaa halka aan maanta joogno oo ah meesha ugu dadka badan adduunka oo dhan iyadoo 6 milyan oo kaqeybgale ay dhammaantood ku jiraan meel 4 bilood ah. ”
Marka, mar kale, way soo noqotay!
Isla habka hawlgalka - xubnaha "maal"X lacag ah"bixinta caawimo", Iyo aakhirka, samee ROI 50% ka dib 30 maalmood qaab ahaan"caawimo".
Tani aad bay uga qosol badan tahay isku daygii hore, hase yeeshee, weli waxaa jiri doona dad diyaar u ah inay dhex galaan, iyadoon loo eegin.
Heerka shaqo la'aanta iyo saboolnimada, iyo sidoo kale ballanqaadka waalan ee 50% ROI, waxaa laga yaabaa inaysan aad u adkaan doonin in dad badan la raaco.
Qorshaha Ponzi ee aadka loo yaqaan - MMM Nigeria; wuu soo noqday, inkasta oo aan la helin xitaa ilaa kala badh buunbuunintii markii hore la soo bandhigay.
Sida muuqata, dadka reer Nayjeeriya waa dad caqli yar oo aan aad u doonayn inay mar kale maalgashadaan qorshaha; ma aha wixii la mariyey markii ay guuldarraysteen markii ugu horreysay.
Top 17 Shirkadaha Shidaalka Nigeria | Rigs, Dakhli, Iyo Networth
Ku kasbasho Dib -u -eegista Naadiga Guriga: Ma Xalaalbaa mise Waa Lacag Fadeexad Online ah?
10 Shirkadda Isweydaarsiga Cryptocurrency ee ugu Fiican Nigeria | Cusboonaysiinta
Dib -u -eegista James Allen 2022: Ganacsatada Dahabka ugu Fiican?
Markaad ka fikirto dheeman, ma waxaad u malaynaysaa inaan la heli karin? digniinta qaswadayaasha si fiican, maahan. James Allen wuxuu bixiyaa cajiib…
Goobo badan ayaa la sameeyay waqtiyadii ugu dambeeyay kuwaas oo noo sheegaya in aan lacag ka samayn karno soo-gelinta…
Lacag Ku Bixi Safarka Oo Dib U Eeg Huteelada: 17 Siyaabood Oo Lacag Qabow Loogu Sameeyo 2022
Dhulka waxa uu leeyahay meelo iyo dhaqamo aad u qurux badan mana aha war in qarnigan...